Insider Computer, 67/38ม.6ซ.เกาะสมุทร ต.ท่าทราย อ.เมือง อำเภอเมือง, Samut Sakhon (2022)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Samut Sakhon > บริการถ่ายภาพ > Insider Computer
Naleey Design - รับออกแบบภาพสินค้า
Changwat Songkhla 90210
98 moo1 Phraya Banlue Lat Bua Luang, Rangsit
Zara pearl Organic by BA Gift
Sylvia's Design Photography
Saint Albert T8N1M8
20 Rhos y Dderwen, Blackwood
St. Helens, Oregon, Beaverton
The Lot, 1041 N Formosa Ave, West Hollywood
Meg Handler Photography
laptopမှာ win 10 update လုပ်တာ touchpadက on မရလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဗျ
ကွန်ပျူတာက အရင်က Monitorမှာအပြည့်ပေါ်ပါတယ်ကျနော်ဘာနှိပ်လိုက်မိတယ်မသိဘူး ဒီလိုပေါ်နေလို့ အရင်လိုလေးပြန်ရချင်လိုကူညီပေးပါဆရာဆမားတို့
Excel နှင့် word ဖွင့်ရင် ဒိလို့ကြီးပေါ်ပီး သုံးလို့မရလို့. ဘာလိုလုပ်ရမလဲ please help
PCမှာFacebook သုံးချင်တာ အင်တာနက်မြန်မည့်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ free VPVလေး ပြောပြပါလားဗျ
Window7 64bitအတွက် cs5 photoshop linkလေးပေးပါဆရာတို့
October (29)ေန႔အတြက္ အတန္းသစ္မ်ား
သင္တန္းခ်ိန္ ညႇိမရလို့ စိတ္ညစ္ေနပါသလား…
👉 လူအမ်ားနဲ႔ သင္ရင္ မလိုက္နိုင္ဘဲ
👉 သင္တန္းရက္ပ်က္လို့ သင္ခန္းစာ
MBC Training Centre ကို
✅ နံနက္ (၇:၀၀) မွ ညေန (၇:၀၀) အတြင္း
⏩သင္တန္းေၾကးကလဲ (၂) ရစ္ခြဲသြင္းလဲရတယ္ဆိုေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္စိတ္ပူစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့
💯 သင္တန္းကာလ ကန္႔သတ္ၿပီး
သင္တာ မဟုတ္လို့ အမွန္တကယ္
💯 တစ္ဦးခ်င္း စနစ္သင္ၾကားတဲ့အတြက္
ရက္ပ်က္ရင္ သင္ခန္းစာ ေနာက္က်ျခင္း
💯 မိမိအခက္အခဲေတြကို ဆရာနဲ႔
အနီးကပ္ ေဆြးေႏြးၿပီး သင္ယူနိုင္တယ္…
💯 သင္တန္းၿပီးသြားလဲ အခ်ိန္မေရြး
💯 တစ္ဦးခ်င္းစီ ရာႏွုန္းျပည့္
တစ္ဦးခ်င္းစီ အနီးကပ္ သင္ၾကားေပးမွာပါ…
💯 သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ပါ
MBC မွတတ္ေရာက္နိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား
2.Advance Office Course
3. Advance Excel Course
4.Computerised Accounting (MYOB)
5.Graphic Design Course
6.Layout Design Course
7.Auto CAD (2D,3D)
9. Summer course for kids
• 7:00 AM to 8:30AM
• 9:00 AM to 10:30AM
• 1:00 PM to 2:30 PM
• 5:30 PM to 7:00 PM
MBC Training Center
(၇၈) လမ္း(၃၄) လမ္းေဒါင့္ Sky Walk တတိယထပ္
MICT Park| Room (4E)
MBC Training Centre page တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွု့နိုင္သလို
ဖုန္း - 09 450022930, 09 781219038,
How much doesacomputer box cost
HY.. Can you help me out please
ဒီ တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္ တင္မဲ့ Post ေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Mobile ဖုန္းဆိုင္က Service စက္ေတြ ျပီးေတာ့ Mp3 Mp4 အစရွိတဲ့ သီခ်င္းေတြ သြင္းတဲ့ စက္ေတြ ျပီးေတာ့ Photoshop ဆိုင္ေတြ အစရွိတဲ့ စက္ေတြမွာ Customer ေတြယူလာတဲ့ Memory Stick / SD Card ေတြမွာ ပါလာတက္တဲ့ Virus ေတြေၾကာင္း မိမိစက္ အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ဗီဒီယိုေတြရဲ႕ Icons thumbnails ေတြကို ရုတ္တရက္ မျမင္ရေတာ့တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပတာ လိုအပ္သြားလို႕ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြ မရွင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္ေအာက္မွာ ဓာတ္ပံုနဲ႕တကြ ျပသေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။
အဲ့ဒီ အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဘာ Software မွ မသံုးပဲ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ ပံုႏွင့္တကြရွင္းျပပါ့မယ္ဗ်ာ။တကယ့္ကို လြယ္ကူလြန္းလွပါတယ္။စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြ အေနနဲ႕ သိသြားရင္ေပါ့ဗ်ာ။မသိေသးရင္ေတာ့ ေခါင္းေတာ္ေတာ္စားသြားမွာပဲေလ။ခုနက ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေပၚကပံုအတိုင္း Windows Box တစ္ခုခုကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ျပီးသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဲ့ဒီ Windows Box ရဲ႕ ညာဘက္ အေပၚေထာင့္နားေလးမွာ Organize ဆိုတဲ့ စာတန္းေလးကို ေတြ႕ေအာင္ရွာျပီး Click လိုက္ပါ အဲ့ဒီမွာ Folder And Search Options ဆိုတာေလးကို ေတြ႕ေအာင္ရွာျပီး Click လိုက္ပါ။ကၽြန္ေတာ္ ေအာက္မွာ ပံုႏွင့္ တကြ ျပေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။
အေပၚက ပံုေလးအတိုင္းလုပ္ျပီးသြားရင္ေတာ့ Folder And Search Options ေနရာကို ေရာက္ပါျပီ။အဲ့ဒီ မွာ General ဆိုတဲ့ Tab ေလးရယ္ View ဆိုတဲ့ Tab ေလးရယ္ Search ဆိုတဲ့ Tab ေလးရယ္ Tab Bar ေလး3ခုရွိပါတယ္။အဲ့ဒီ Tab Bar ေလးေတြထဲက အလယ္က View ဆိုတဲ့ Tab ေလးကို Click လိုက္ပါ။အလယ္နားေလာက္မွာ Advanced Setting ဆိုတာရွိပါတယ္။သူရဲ႕ ေအာက္နားေလးမွာေတာ့ Files And Folders ဆိုျပီး Title ေလးရွိပါတယ္။အဲ့ဒီ ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ စာေၾကာင္းေလး Always Show Icons, Never thumbnails ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းေလးမွာ အမွန္ျခစ္ကေလး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။အဲ့ဒီ အမွန္ျခစ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕က ျဖဳတ္ေပးျပီး Apply ႏွိပ္ျပီးရင္ Ok ႏွိပ္လိုက္ပါ။ကၽြန္ေတာ္ ေအာက္မွာ ပံုႏွင့္တကြ ျပသေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။
ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခုနက ဓာတ္ပံုေတြ ရွိေနတဲ့ Windows Box ကို ျပန္ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ဓာတ္ပံုေတြ နဲ႕ ဗီဒီယို Icons ေတြ မျမင္ရဘူးျဖစ္ေနတာေတြကို ျပန္ျပီး ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ေအာက္က ပံုေလးအတိုင္း မိမိတို႕ရဲ႕ စက္မွာရွိေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကိုလဲ Image Viewer နဲ႕ၾကည့္စရာမလိုအပ္ပဲ ဒီအတိုင္းျမင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။
#Credit IT Bank
Multimeter များဆီသို့ ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း။
Multimeter ဆိုသည်မှာ Current, Voltage, Resistance တို့ ကဲ့သို့သော Electrical တန်ဖိုးများကို တိုင်းတာ သော ကိရိယာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်နည်းပညာရှင်(Electricians) များမှ အစပြု၍ လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် လုပ်ငန်းတွင်းရှ်ိ အလုပ်သမားများ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Instrument တစ်ခု ဟု ဆိုလျှင် မှား လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ Multimeter ကို Multitester ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလေ့ရှိကြပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် Multimeter ဟုသာ အခေါ်များပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် Multimeter အမျိုးအစား (type)နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
၁။ Analog Multimeter
၂။ Digital Multimeter
Multimeter စတင် အသုံးပြုသော New User များအတွက် Analog Multimeter ပေါ်ရှိ Scale များ အား အလွယ်တကူ ဖတ် တတ်ရန် အစပိုင်း တွင် ခက်ခဲနေ မည်ဖြစ်ပါသည်။
Diode တစ်လုံးအား စစ်ဆေးသည့်အခါ Analog meter များသည် တန်ဖိုးတိတိကျကျ ပြသနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးရှိပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Electronic သမားများ Analog meter ကို အသုံးများကြပါသည်။
Digital Meter များဟာ တိကျသော တန်ဖိုးပမာဏ တိုင်းတာမှု ကို Digit ဂဏန်းဖြင့် ဖော်ပြသောကြောင့် ဖတ်ရ လွယ်ကူ စေ၍ တိကျသေချာမှု ရှိပါသည်။ Digital meter များကို လည်း အသုံးပြုမှု များပြား လာကြပါသည်။
Digital Multimeters များသည် ပညာရှင်များစွာ တို့အတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးလှသော မရှိမဖြစ် tool တခု ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန် မှန်ကန်စွာ အသုံးချ နိုင်ပါက လျှပ်စစ်ပြသနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ၎င်း အမျိုးအစား နှစ်ခု၏ အဓိက ခြားနားချက်မှာ တန်ဖိုး (Value) ပြသသည့် (Screen) မျက်နှာပြင် ပင် ဖြစ်ပြီး Analog Multimeter များတွင် တိုင်းယူရရှိသော တန်ဖိုးများကို ပင်အပ်ကဲ့သို့သေးမျှင်သော လက်တံ တစ်ခု မှ Screen ပေါ်တွင် မြင်နေရသည့် တန်ဖိုးဂဏန်းများ သို့ ညွှန်ပြပါသည်။
Digital Multimeter များ တွင်တော့ တန်ဖိုးများ ကို Digit ဂဏန်းများဖြင့် ပြသပေးပါသည်။
၂။ Analog multimeter သည် တိုင်းတာမှု ရလဒ် တန်ဖိုးများ ကွာခြားမှု 3%ခန့်မျှ ဖြစ်ပြီး Digital Multimeter 0.5% နှင့် အောက် ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် Digital သည် Analog ထက် ပို၍ အသေးစိတ်သော တန်ဖိုးများ ပြသနိုင်သည်။
၃။ Analog Multimeter သည် Digital meter ထက် ပို၍ ရှေးကျပါသည်။
၄။ Modern Digital meter များသည် additional features များ ဖြစ်သော Capacitance တန်ဖိုး၊ Temperature၊ Frequency၊ Sound level နှင့် Continuity beep များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
၅။ Analog meter သည် တိကျသော အတိုင်းတာ ပမာဏ ကို Manual ရွေးချယ် ပေးရလေ့ရှိသလို Digital သည် Auto range ဖြင့် unit များ၏ တန်ဖိုးကို ပြသနိုင်သည်။
၆။ Analog meter များသည် လုံလောက်သော လေ့ကျင့် မှုဖြင့် တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း Digital meter များမှာ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးသည့် Beginner များပင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည်။
၇။ Analog meter သည် အနည်းငယ် စျေးသက်သာမှု ရှိပြီး Digital meter သည် အစဉ်သဖြင့် စျေးကြီး လေ့ရှိသည်။
၎င်း အမျိုးအစား နှစ်ခု စလုံးတွင် အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင် တိုင်းတာတံ Probe နှစ်ချောင်းပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး မိမိတိုင်းတာလိုသော Equipment ပေါ်သို့ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် Probe နှစ်ချောင်းကို ကိုင်တွယ် တိုင်းတာရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် အမျိုးအစား အသုံးပြုသည် ဖြစ်စေ ၎င်း နှင့်အတူပါဝင်လာသော Manufacturer ၏လမ်းညွှန်မှု User instruction manual စာအုပ် ငယ် လေးအား ဖတ်ရှု လိုက်နာ ခြင်းဖြင့် Equipment သက်တမ်းကို ရေရှည် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်သလို အသုံးပြုမည့် User ကိုပါ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
၎င်း meter များကို ဝယ်ယူရန် ရွေးချယ်စဉ်ကတည်းက ဘယ်လို အမျိုးအစား အသုံးပြုမည်လဲ မည်သည့် Range ကို တိုင်းတာမည်လဲ Specification များ သတိပြု ဖတ်ရှုကာ ဝယ်ယူသင့်ကြပါသည်။
Beginner များအတွက် ၎င်း meter နှစ်မျိုး၏ အသုံးပြုပုံ များကို အောက်ပါ Video နှစ်ခုဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
How to use Analog Multimeter (Training Video)
How to use Digital Multimeter(Training Video)
လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသုံးများ နာမည်ကြီးသည့် Meter နှစ်မျိုး၏ User Manual များကို အောက်ပါ Pdf ဖိုင်ဖြင့် free download ဆွဲယူ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ Detail ဖတ်ရှု ပြီးပါက multimeter များအကြောင်း စုံလင်စွာ နားလည် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
SANWA Analog Multimeter User's Manual
Fluke Digital Multimeter User's Manual
Johnny Arkar(၁၇.၂.၂၀၁၆။ ၂၃:၁၃)
Credit - Johnny Arkar
အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.....
ပုံမှန် Laptop များမှာ Power and Battery-status Light နှင့် Hard-drive Activity Light ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပါလေ့ရှိတာသတိပြုမိပါတယ် Laptop ဖွင့်ပြီဆို LED မီးလေးနှစ်ခုလင်းနေတတ်တယ် နောက်ပိုင်းထွက် Laptop အချို့မှာ Power Button ပေါ်မှာ Power and Battery-Status Light ပါတတ်တယ် Hard-drive မီးလည်းသပ်သပ်ပါ‌လေ့ရှိတယ်
Dell Inspiron 3593 Laptop မျိုးမှာ Light က တစ်ခုပဲပါတယ်
Power ‌and Battery-Status Light သို့မဟုတ် Hard-drive Activity အချက်ပြမီးအဖြစ်တစ်ခုခုအနေနှင့်ပြပေးဖို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်
Power and Battery-status Light သို့မဟုတ် Hard-drive Activity Light အဖြစ်ပြဖို့ Fn+H (Keyboard မှ Function key နှင့် H ကိုတွဲနှိပ်ပါ) အပြန်အလှန်ပြောင်းလိုတိုင်းထို Key များကိုတွဲပြီးပြန်နှိပ်ပါ
တင်သမျှဖတ်ရှုနိုင်စေဖို့ Page များကို Like နှိပ်ထားပါခင်ဗျာ
ZMO Online Training Page
Cute & Charm Computer and Mobile Devices Sales and Services
Ref: Dell Inspiron 3593 manual pdf from Dell website
Windows 10 ကို software မသုံးပဲ Key ဖြင့် Activated ဖြစ်အောင် လုပ်နည်း
Windows 10 Computer အားလုံးကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း ဖြင့် Windows Activated ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Windows Activated ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ လုပ်ဆာင်ချက်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အသက်သွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ Windows တင်ပြီးသောအခါမှာ၊ အသုံးပြုရင်းနဲပဲဖြစ်
ဖြစ် Deskstop ရဲ့ဘေး ညာဘက်က TaskBar အပေါ်တွင် Message Box လေးတွေပြသတက်ပါသည် ။ ဘယ်လို စာသားတွေပြလဲဆိုရင်
Activate Windows Now ,Windows Activation Require, Windows is not activated, This copy of windows is not genuine , Your Windows License Will Expire Soon အစရှိသဖြင့် ပေါ်လာပါသည် ။ ထိုကဲ့သိုပေါ်နေမယ်ဆိုလျှင် မိမိကွန်ပျူ တာကို Windows Activated မဖြစ်မနေလုပ်ရတော့ မည်ဖြစ်ပါသည် ။ Windows Activated မလုပ်ပဲ ဆက်သုံးနေမယ်ဆိုလျှင် မိမိကွန်ပျူတာဟာ ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ ။ ဥပမာ Wallpaper Change ချင်တယ် မရဘူး, Software တွေကို Run တယ်မရဘူး Activated လုပ်ပါဆိုတဲ့ စာကြောင်းပဲပြလာတယ် ။ အဲဒီအခါမှာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့လို ကွန်ပျူတာ စတင်လေ့လာနေသူများအတွက်ပါ။ သိတဲ့ဆရာများကတော့ ကျော်သွားပေးပါ။
အောက်က ကီးနံပတ်တွေကို ကော်ပီယူထားလိုက်ပါ
- slmgr/ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
- slmgr /skms kms.digiboy.ir
သင်ဆရာ/မြင်ဆရာ/ကြားဆရာ အားလုံးကို လေးစားလျှက်
Windows 10 ကို software မသုံးပဲ Key ဖြင့် Activated ဖြစ်အောင် လုပ်နည်း
Windows 10 Computer အားလုံးကို အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း ဖြင့် Windows Activated ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
#ဒါကတော့ တကယ့် ရွှေပါပဲ
#Microsoft_Word_ထဲမှာ CV Form ရိုက်နည်း။
အဆင်ပြေတယ်ဆို Yes လို့မန့်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။
CV Form ရိုက်နည်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် CV form(ကိုယ်ရေးအကျဉ်း) ရိုက်နည်းလေးပါ။ ခေါ်ဆိုသောဌာနရဲ့ ကြော်ငြာစာမှ လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ထည့်ရိုက်ပါ။
...🖥💻ဝင်းဒိုး (10) မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဗားရှင်းအလိုက်အမည်တွေကိုသိရှိထားရန်လိုအပ်သည်....
-Code Name 19H1
-Version (1903) 2019 ခုနှစ်3လပိုင်းထုတ်
-Code Name 19H2
-Version (1909) 2019 ခုနှစ်9လပိုင်းထုတ်
-Code Name 20H1
-Version (2004) 2020 ခုနှစ်4လပိုင်းထုတ်
-Code Name 20H2
-Version (2009) 2020 ခုနှစ်9လပိုင်းထုတ်
စသည်ဖြင့်ယခုနောက်ပိုင်းဆော့ဝဲအများစုသည် ယခုပြထားသည့်ဝင်းဒိုး (10) လေးမျိုးကိုသာအင်စတောလုပ်ရန်လက်ခံတော့သည်ကိုနားလည်ထားရန်လိုအပ်သည်....
(🖥3rd November 2020).
Covid-19 ကာလအလှူအနေဖြင့် အသင့်သုံး Design အစအဆုံးပါ..
Link မပေးလို့ဆိုပြီး ထိကြရိကြတဲ့ မိတ်ဆွေများ Link တင်ပေးလိုက်ပါပြီ စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းကြပါ😍😍😍
၁။ အခုလိုတင်ပေးတဲ့အတွက် Page ကို Like ပေးစရာမလိုပါ။
၂။ ငွေကြေးတပြားတချပ်မှ ပေးရန်မလိုပါ။
Driver တွေကို Backup လုပ်နည်း
မိမိမှာ Windows တင်တဲ့အခါမှာ Driver တွေ ပြန်တင်ရတဲ့ ဒုက်ခတွေမှ ကင်းဝေးသလို Driver ခွေ မရှိလို့ အင်တာနက်ကလဲ ပြန်ရှာနေစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသုံး၀င်အသုံးတည့်တဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ Back Up လုပ်တာကို အသေးစိတ်ရေးပေးပါမည်.။ Restore ပြန်လုပ်တာကလဲ ဒီပုံစံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ (ကျန်တဲ့ Tool တွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်းစမ်းပါ.။ ကျွန်တော်က Back Up လုပ်တာဘဲ တင်ပြချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။)
1. DriverMax ကို ဒီနေရာမှာ Download အရင်ချလိုက်ပါ။
2.Software ကို Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Backup Driver ကို Click လိုက်ပါ။ အောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ။
3.Next ကို ထပ် Click လိုက်ပါ။
4.ခဏလောက် စစ်ဆေးပါမည်။ Driver တွေ ကျလာပါမည်.။ Select All ကို click လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် မိမိ Back up လုပ်ချင်တဲ့ Driver တွေကို Select လုပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အကုန်လုံးကို Backup လုပ်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် Select all ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် Nate ကို click လိုက်ပါ။
5.မိမိ Backup လုပ်တဲ့ Driver တွေကို Save မည့်နေရာ ရွှေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ZIP file နဲ့ချူံပြီး Save မှာလာ Folder နဲ့ဘဲ Save မှာလာ ဆိုတာ ရွှေးချယ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က Folder နဲ့ဘဲ Save လိုက်ပါတယ်။ Next ကို click လိုက်ပါ။
6.အောက်ပါအတိုင်း Backup လုပ်နေပါမည်။
7.ပြီးရင်တော့ မိမိ Backup ဖိုင်ကို ကြည့်ချင်ရင် Open extraction folder ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မကြည့်လဲရပါတယ်။ Close ကို နိုပ်လိုက်ပါ။
8.Windows ပြန်တင်ပြီးတာနဲ့ Windows မှာ ပါတဲ့ Backup ဘဲ အသုံးပြုလဲရသလို ဒီ Software ကို Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Restore Driver from Backup ကိုနိုပ့်ပြီး မိမိ Backup လုပ်ထားတဲ့ Folder ကို ရွှေးပြီးတာနဲ့ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
Nero Express ဖြင့်
အခွေ Burn ခြင်း
data များ ကို nero express ဖြင့် အခွေ burn နည်းလေးပါ။
ဥပမာ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ ဗီဒီယိုကို
dvd အောက်စက်မှာ ကြည့်ဖို့
dvd အခွေလွတ်ထဲ ထည့်နည်းလေးပါ။
မိမိ Computer ရဲ့ CD,DVD Writer ထဲကို အသုံးပြုမယ့် CD or DVD အလွတ်တစ်ချက်ကိုထည့်ထားပါ။ Nero Express Software ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် ပုံပါအတိုင်း burn ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
(CD တစ်ချပ်မှာ 700 MB ဆန့်ပါတယ်။ DVD ကတော့ 4.7 GB ဆန့်ပါတယ်။ အဲ့လောက်ဆိုရင် burn မဲ့ data နဲ့ အခွေလွတ် ဆန့်/ မဆန့် တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။)
... ယခုနောက်ပိုင်းဝင်းဒိုးအမြင့်တွေမှာ လုံခြုံရေး (Security) မြင့်လာခြင်းကြောင့်အဖြစ်များလာသော...
(Virus:Win32/Floxif.H) ဟူသောပြဿနာကိုအလွယ်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းအဖြစ် (Exclusions) (ချန်လှပ်ထားရန်) ဝင်းဒိုးကိုခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်...
- အဖြစ်များသည်မှာ မြန်မာကီးဘုတ် (KeyMagic) နှင့် (Internet Download Manager) Error တက်ပြီးသည်နှင့် အဒိုဘီဆော့ဝဲများတွင် (0xc0000005) ကဲ့သို့ error များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်...
- အကောင်းဆုံးမှာဝင်းဒိုးတင်ပြီးသည်နှင့် ယခုပြသထားသော...ဆက်တင်များကိုပြုလုပ်ထားသင့်သည်...
- (Exclusions) > Add or remove exclusions >
(1) + Add an exclusions >Folder >
C:\_ >Peogram Files
(2) + Add an exclusions >Folder >
C:\_ > Program Files (x86)
(3) + Add an exclusions >Folder >
C:\_ Users (Select Folder)
စသည့်ဖိုဒါ (3) ခုကို (Exclusions) မှာထည့်ထားပေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်....
- အခြားမိမိစက်မှာကျန်ရှိသော (D:)(E:) ပါတီးရှင်းများမှဒေတာများကိုလည်း ဖိုဒါတစ်ခုမှာထည့်၍ ၄င်းဖိုဒါကို အထက်ပါအတိုင်း (Select Folder) ပေး၍ (Exclusions) မှာထည့်ထားပေးပါက VirusWin32.....error Report တက်မည်မဟုတ်တော့ပါ...
@ဦးကောင်းမြင့် ဆီမှ တစ်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်
67/38ม.6ซ.เกาะสมุทร ต.ท่าทราย อ.เมือง อำเภอเมือง
บริการและอุปกรณ์การถ่ายภาพ อื่นๆใน Samut Sakhon (แสดงผลทั้งหมด)
บริษัท ไทยยูเนียนโปรดักส์ จํากัด 79/159 ม. 7
𝐒𝐨𝐞𝐊𝐨𝐇𝐭𝐰𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 Welcome
ร้านถ่ายรูปร้านแรกในกระทุ่มแบน บริการงานภาพถ่าย แบบมืออาชีพ